Guardiola: 4, 5 ama 6 Beddel Ayaan U Baahanahay Inta Ciyaartu Socoto
HomeWararka MaantaGuardiola: 4, 5 ama 6 Beddel Ayaan U Baahanahay Inta Ciyaartu Socoto
Pep Guardiola ayaa u soo jeediyey FIFA in isbeddel lagu sameeyo sharciga ciyaaraha, gaar ahaan inta ciyaartoy ee ay kooxuhu beddeli karayaan inta ay ciyaartu socoto.
Xidhiidhka kubadda cagta FIFA ayaa toddobaadkan ka shiraya in la kordhiyo waddamada ka qayb-gala koobka adduunka oo la gaadhsiiyo 48 waddan, taas oo ka dhigan in 16 dal oo cusub lagu kordhin doono waddamadii hore uga qayb-geli jiray oo ay tiradoodu ahayd 32.
Haddaba, doodda toddobaadkan waxa soo dhex galay tababare Guardiola oo tibaaxay in loo baahan yahay isbeddel lagu sameeyo shuruucda maadaama wakhti yar oo cidhiidhi ah ay dhacayaan kulamo badan, taas daradeedna ay kooxaha ku adkaanayso in saddex ciyaartoy oo kaliya ay beddelaan inta ay ciyaartu socoto.
“Jadwalkan cidhiidhiga ahi wuxuu dilayaa ciyaartoyga. Waxa la doonayaa in ciyaaraha la kordhiyo, kordhiyo oo haddana la kordhiyo, taasina waxay saamaynaysaa tayadii. Anigu kaliya ciyaartoyga ayaan ka fikirayaa, waxay u baahan yihiin wakhti ay ku nefisaan, ku nastaan ama ku raaxaystaan.” Sidaas ayuu yidhi tababarahan 45 jirka ah.
Guardiola oo sababaynaya sababta loogu baahan yahay in kooxuhu beddelaan in ka badan afar ciyaartoy, waxa uu yidhi: “Saddex beddel oo kaliya ayaa la ogol yahay, maxaa looga dhigi waayey afar, shan ama lix. Ciyaartoygu si ka wanaagsan sidan ayey u ciyaari lahaayeen, tababareyaashuna farsamo ka duwan ayey isticmaali lahaayeen.”
Guardiola oo hadalkiisa sii wata, waxa uu sheegay in beddelka badan uu yarayn lahaa dhaawaca ciyaartoyga soo gaadha, waxaanu yidhi: “Wax walba way wanaagsanaan lahaayeen.”
Shirka FIFA ee lagaga tashanayo ballaadhinta waddamada ka qayb-gelaya Koobka Adduunka, waxa go’aankiisa lagu dhawaaqi doonaa bisha January, laakiin lama filayo in isbeddel lagu sameeyo dalalka ka qayb-gelaya koobka adduunka inta ka horreysa sannadka 2026. Fikirkanna waxa ka soo horjeeda dad uu ugu horreeyo Guardiola.
“Arrinta noocan ahi macquul maaha, sababtoo ah waxaanu doonaynaa in aanu xili ciyaareedka dhamaysano, toddobaad kaddibna koobka Adduunka, saddex toddobaad kaddibna waxaa loo baxayaa ciyaaraha pre-season-ka. Waxa aanu tegi karnaa China, Maraykanka, Australia. Waxaad la ciyaari kartaa Milan, Juventus, Madrid waana inaad ka guuleysato. Dadku waxay kaa dalbanayaan inaad ciyaar fiican soo bandhigto adigoon isdiyaarin. Kaddibna waad soo laabanayso, markaad 11 bilood ciyaartona, waxa soo gelaya Koobkii qaramada Yurub.” Sidaas ayuu yidhi Guardiola oo diiddan in la kordhiyo waddamada, taas oo keenaysa in wakhtigii bisha ahaa ee uu ku dhamaan jiray Koobka Adduunku uu ka bato.
Manchester City Iyo CSKA Moscow Oo Ciyaarta Champions League Kuwada Ciyaari Doona Garoon Madhan
Inter Milan 2-1 Bologna – Goals & Highlights
Goals & Highlights: Aberdeen 2-1 Rangers